I-Bloodline yase-Italian-Ubusebenzisa njani ubumi ngokuzalwa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Indawo yeendwendwe » I-Bloodline yase-Italian-Ubusebenzisa njani ubumi ngokuzalwa
Ingqikelelo yobumi ngokomnombo iqokelele ukuthandwa kwiminyaka yakutshanje. Abantu baseMelika abalandela iingcambu zabo babuyela kwezinye iindawo zehlabathi bafuna ukuzibuyisela kwaye baqale ubomi kwilizwe lemvelaphi yabo. I-Italiya iphakathi kweendawo ezithandwayo ezibonelela ngokhetho lweJure Sanguinis okanye ubumi ngokomnombo. Ukuba unokulandela kwaye uqinisekise i-bloodline yakho kwilizwe, unelungelo lokubanga ubumi. Elona candelo lihle kukuba sisiqalo nje njengoko ungadlulisela ilungelo kwizizukulwana ezizayo.
Olu khetho luvakala ngathi lukhulu ukuqala uhambo lwakho lokufudukela kwelinye ilizwe, kodwa kufuneka uqonde izinto ezimbalwa ngaphambi kokuba uye phambili. Unga funda esi sikhokelo esipheleleyo ukuba ufuna ukuqalisa inkqubo yesicelo kwaye ubange ilungelo lakho. Umgca wezinyanya zakho unokukusebenzela, ke qiniseka ukuba uyisebenzisela inzuzo yakho. Makhe sichaze ukuba ungayisebenzisa njani ukuze ufumane ubumi base-Italiya ngokomnombo.
Yazi imimiselo yokufaneleka
Ubumi baseTaliyane ngokomnombo buyafumaneka kubafaki-zicelo ngomgca wokhokho babo, ngaphandle komda kwinani lezizukulwana. Kuthetha ukuba unako ibango ngabazali bakho, ootatomkhulu, ootatomkhulu, nangaphaya. Nantsi imimiselo yokufaneleka ekufuneka uyilandele ukuseka ibango:
Ukuba uzelwe kubazali baseTaliyane okanye wamkelwa njengomntwana (iminyaka engaphantsi kwama-21 ithathwa njengomntwana ukuba wamkelwa ngaphambi ko-1975 kwaye ngaphantsi kwe-18 ukuba wamkelwa emva ko-1975)
Umzali/ukhokho wase-Italiya akufuneki athathe ubumi ngokuzalwa kwelinye ilizwe xa umntwana wabo wazalwa
Ukhokho kufuneka abe ngummi wase-Italiya emva kokumanyana kwelizwe ngo-1861
Ukufaneleka kwendlela kuvakala kulula njengokuzalelwa kubazali baseTaliyane. Kodwa kukho ezinye izinto ezingaqhelekanga kulo mgaqo. Ukuba uwela kwelinye lala macandelo, kuya kufuneka ukhangele enye indlela yokufaka isicelo. Nazi izinto ezingaphandle kumgaqo jikelele:
Ukhokho owazalelwa e-Italiya wavela ngaphambi koJuni 14, 1912
Wazalelwa ngumfazi waseTaliyane ngaphambi kowe-1948
Ufuna ukufaka ibango ngomgca kamama, kunye nomntu obhinqileyo onyuke wazala ngaphambi komhla woku-1 kuJanuwari, 1948.
Abasetyhini base-Italiya babengavumelekanga ukuba bagqithise amalungelo abo okuba ngabemi ngaphambi kowe-1948, besenza umthetho ucalucalulo. Ulungiso olulandelayo luvumela abo bafake izicelo ukuba bafake izicelo ngenkqubo yokugweba phantsi koMthetho we-1948.
Hlala inyathelo phambili ngamaxwebhu
Ukuba ufanelekile kumzila, ungaqhubeka nenkqubo. Kodwa iyavakala ukufumana isiqalo ngokuqokelela amaxwebhu kuba uya kufuna uluhlu olude lwenkqubo. Ngokuyintloko, uya kufuna izatifikethi zokuzalwa, ukufa, umtshato, kunye nokuzaliswa ngokwendalo ukuze uqinisekise ukunxibelelana kookhokho bakho. Uya kuzifuna kwi-Italian comune kakhokho wakho kunye nelizwe lokuzaliswa. Kusenokuba ngumceli mngeni ukuwakhusela kwiiofisi zasekuhlaleni, kodwa kufuneka uwathengele inkqubo. Iirekhodi ezibalulekileyo ezikhutshwe yi-US kufuneka ziqinisekiswe, ziguqulelwe, kwaye zithunyelwe ukuba zithathwe njengezomthetho kwinkqubo.
Yiba nolindelo olucacileyo
Nje ukuba ufumane amaxwebhu akho endaweni, ungafaka isicelo sobumi base-Italiya ngokuzalwa. Kuya kufuneka ugcwalise ifom yesicelo kwaye uyingenise kwi-consulate yase-Italiya ekufutshane nawe ukuze uqalise. Baza kukunika idinga lokungenisa amaxwebhu kunye nokuvela kudliwano-ndlebe. Nangona ilinyathelo lakho lokuqala ukuya kwi-a incwadana yokundwendwela yesibini, kufuneka ube nolindelo olucacileyo malunga nenkqubo kunye namaxesha. Ukuqeshwa kunokuthatha ixesha elingangonyaka, ngokuxhomekeke kwinani lezicelo esele ziqhuba. Unokucinga ngokufaka isicelo ngaphakathi e-Itali ukukhawulezisa uhambo. Unokuseta indawo yokuhlala esemthethweni apho ngexesha lokucubungula.
Kungcono ukusebenzisana nengcali yobumi base-Italiya ukukunceda kule nkqubo. Banokukukhokela kwaye bakuncede kwinqanaba ngalinye, beqinisekisa uhambo olulula nolulula emgceni. Ingcali yasekuhlaleni inohlobo oluchanekileyo lonxibelelwano, ke ukufumana amaxwebhu akho e-Italiya kuba lula. Baza kuqinisekisa kwakhona ukuba onke amanye amaxwebhu akhona kwaye akukho zimpazamo kunye nezinto ezishiyiweyo kwisicelo. Ukuba nengcali yokusingatha inkqubo kwakhona kukunika ukuzithemba kunye noxolo lwengqondo.
Ubumi ngokomnombo yeyona ndlela ilula yokungena e-Italiya kwaye uqale ubomi obutsha kwilizwe lookhokho bakho. Kodwa inkqubo ingaba yinde kwaye yoyikeka, ngakumbi ukuba uyayihamba ngaphandle kobuchule bobuchwephesha. Joyina izandla kunye neengcali, kwaye uya kufezekisa injongo yakho nangaphambi kokuba ulindele.